Sii hayaha Wasiirka Shaqada XFS oo shir Guddoomiyay kulanka habraaca shaqo qorista shaqaalaha Dowladda+Sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Sii hayaha Wasiirka Shaqada XFS oo shir Guddoomiyay kulanka habraaca shaqo qorista...
Sii hayaha Wasiirka Shaqada XFS oo shir Guddoomiyay kulanka habraaca shaqo qorista shaqaalaha Dowladda+Sawirro.
Sii hayaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Sadiiq Warfaa ayaa maanta guddoomiyay kullan la xiriiray dardargalinta hab-raaca shaqo qorista shaqaalaha dowladda waxaan goob joog ka ahaa kullanka guddoomiyaha Guddiga qaranka shaqaalaha rayidka Xasan Abshiroow ,xubno ka tirsan guddiga iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda.
Kulanka ayaa ka dhacay xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo diiraradda inta badan lagu saarayay arrimaha shaqaalaha rayidka iyo nidaaminta hab-raac shaqo qorista ee shaqaalaha dowladda.
Previous articleQM oo sheegtay in ay kumannaan Soomaali ah ku xanniban yihiin Dalka Yemen.
Next articleMarwada Madaxweynaha Dalka oo dhagax-dhigtay Cisbitaalka Hooyada iyo Dhalaanka Hobyo+Sawirro.